प्रदेश-३ – Page 250 – Halkaro
सम्झनामा कृष्णबन्धु पिया
बैंकहरुको पार्किङ क्षेत्र नहुँदा ट्राफिक जाम
प्रकाशित मिति : २०७३, १२ माघ बुधबार
चितवन । नारायणगढ बजारका व्यवसायी तथा बैंककर्मीहरुले आफ्ना सवारी साधन आफैंले व्यवस्थित तरिकाले पार्किङ गरेमा त्यहांको अस्तव्यस्त केही हदसम्म कम हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा आज भएको बजार व्यवस्थापन तथा सवारी पार्किङ सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । विशेषगरि मेन रोड र मिलन रोडका पसलहरुका कर्मचारी र व्यसायीहरुले […]
रत्ननगरमा तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने
चितवन । यही माघ १४ र १५ गते रत्ननगरमा ५३ औं जिल्ला व्यापी तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने भएको छ । रत्ननगर तेक्वान्दो डोजाङ र रत्ननगर नगरपालिकाको सयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो । प्रतियोगितामा जिल्लाभरका २२ वटा डोजाङका करिव २५० जना खेलाडीको सहभागीता रहने प्रतियोगिताका संयोजक एवंम् तेक्वान्दोका अन्तराष्ट्रिय निर्णायक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । पुरुष […]
जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता सुरु, पत्रकार खनाल पुरस्कृत
चितवन । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड अन्र्तगत जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता बुधवार देखि चितवनको नारायणगढमा सुरु भएको छ । चितवन जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा नारायणगढ स्थित क्याम्पाचौरमा सुरु भएको प्रतियोगिताको एक कार्यक्रमकाबीच पुर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोतम पौडेलले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा वोल्दै प्रमुख अतिथी पुर्व खेलकुद मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय पहिचान,व्यक्तित्व विकाससंगै जीवन निर्वाहको आधार […]
अात्महत्या गर्न नारायणीमा फाल हानेकी महिलाको उद्दार
चितवन । नारायणी नदीमा अात्महत्या गर्ने प्रयास स्वरूप फाल हानेकी एक महिलालार्इ सशस्त्र प्रहरीले उद्दार गरेको छ । बर्ष ४० की मिना उप्रेती मानसिक सन्तुलन ठिक नभई कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस टिचिङ्ग हस्पिटल भरतपुरमा उपचार गराई रहेकोमा उक्त अस्पतालबाट भागी भ.उ.म.न.पा.-३ स्थित नारायणी नदिको पुलबाट हामफाली आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । उनलार्इ सशस्त्र प्रहरी […]
भन्सार छलि गरी ल्याईएको अवैध चाँदी बरामद
प्रकाशित मिति : २०७३, ११ माघ मंगलवार
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले भन्सार छली ल्याएको अवैध चाँदी बरामद गरेको छ । सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका कार्यालय प्रमुख बसन्त कुमार लामा सहित खटिएको प्रहरी टोलीले जि.मकवानपुर हेटौडा उ.म.न.पा.१७ रातोमाटे स्थित प्रहरी चेकपोष्टमा बिरगंजबाट हटौडा तर्फ आउदै गरेको ना. १७ प. ४६४९ नं. मोटरसाईकलमा ल्याइदै गरेको अबैध ४ किलो ६६० ग्राम चाँदी बरामद गरेको […]
अब निकुञ्जभित्र कन्दमुल टिप्न जान पाइने
चितवन । स्थानीय बासिन्दाले निकुञ्ज र आरक्षभित्र प्रवेश गरी जंगली सागसब्जी र कन्दमूल टिप्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधन विधेयक २०७३ मा ‘जंगली सागसब्जी र कन्दमूल संकलन तथा माछा मार्न स्थानीयलाई अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ । निकुञ्ज र आरक्षभित्र सुविधाको बाटो, रैथाने चरिचरन, खानेपानी, सिँचाइ […]
चितवनमा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर
प्रकाशित मिति : २०७३, ११ माघ मंगलवार January 24, 2017
चितवन । ग्लोबल रिच शैक्षिक परामर्स संस्थाले मंगलबार भरतपुरमा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरको आयोजना गरेको छ । सो फेयरमा विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि काउन्सिल गरिएकोे ग्लोबल रिचका प्रबन्ध निर्देशक नारायण बजाजले जानकारी दिनुभयो । युनिभर्सिटी अफ वेष्टर्न सिड्नी, युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क, युनिभर्सिटी अफ होलुगंग लगायत १३ वटा युनिभर्सिटीहरुले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श दिएका थिए । वर्षमा […]
मञ्जुश्री वर्षलाई स्वागतको तयारी
चितवन । भरतपुर नगर तामाङ समाजले यसवर्षको ल्होछार पर्व भब्य र सब्य तरिकाले मनाउने भएको छ । तामाङ जातिको महान सास्कृतिक पर्व रहेको सोनाम ल्होछारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ । हरेक वर्ष माघ शुक्ल पक्षको प्रतिप्रदा तिथिका दिन तामाङ समुदायले आफ्नो साँस्कृतिक परम्परा अनुसार ल्होछार पर्व मनाउदै आएको र यस पटकको पर्वको […]
जिल्लास्तरीय छनौट प्रतियोगिता बुधवारदेखी
चितवन । नवौ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता अन्र्तगत जिल्लास्तरीय छनौट प्रतियोगिता बुधवार देखि सुरु हुदैछ । प्रतियोगिता सवै तयारी पुरा भएको आयोजक जिल्ला खेलकुद विकास समिति चितवनले जनाएको छ । यसअघि चित्रवन नगरपालिकाको प्रस्ताविक क्षेत्रिय रंगशालामा हुने भनिए पनि प्राविधिक कारण पुन क्याम्पाचौरमै प्रतियोगिता हुन लागेको समितिका कोषाध्यक्ष केशव आचार्यले जानकारी दिए । जिल्ला स्तरको […]
निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुन्छः रक्षामन्त्री खाँड
चितवन । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउनका लागि बनेको भन्दै निर्वाचनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । प्रेस युनियन चितवनले मंगलबार विहान चितवनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बौल्दै उनले सरकार निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउनका लागि नै बनेको हो, हामीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउनका लागि राजनीतिक छलफल गरिरहेका छौँ’, उनले […]